Antigua na Barbuda ensmụ amaala maka Rendezvous Bay Share
Ọrịre nke oke mgbagwoju maka inweta ụmụ amaala Antigua na Barbuda
Ndị otu Rendezvous Bay na-arụkọ ọrụ na mmekọrịta gị na gị iji wuo ụlọ agwaetiti gị pụrụ iche n'otu n'ime ogige ntụrụndụ mba kachasị mma n'ụwa.
Ezubere iwu iwu Rendezvous Bay iji kwado owuwu nke jikọtara okike na gburugburu ebe obibi. Echiche dị egwu na ikuku na-ekpo ọkụ na-eme ka oghere ndị dị n'èzí pụta, ebe ọdịdị mara mma na-adị jụụ, ihe oriri, oghere oge.
Site na njupụta ụlọ dị ala maka okomoko nke nzuzo, ụlọ ọ bụla na Rendezvous Bay ga-abụ ụzọ nzuzo. Iwu imepụta chọrọ oghere gbajiri agbaji na ntinye ụlọ ga-eme ka ndị ezinụlọ na ndị enyi nwee obi ụtọ ma nye ezumike na ebe obibi n'ime ụlọ ọ bụla.
Onye na-azụ ụlọ nwere ike iji otu n'ime usoro omenala Rendezvous Bay, mepụta ụdị omenala, ma ọ bụ chepụta ụlọ nke aka ha, na-arụ ọrụ na atụmatụ nke Rendezvous Bay ma ọ bụ na onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ. Ihe oru ngo aghaghi agbaso uzo izugbe na ihe owuwu nke agwaetiti a dika atughari ya na Rendezvous Design Control Rulele ma ndi otu nyocha ihe nyocha. Nwere ike ịrụ ọrụ na mpaghara ma ọ bụ mba ime na-emepụta gị oke. Anyị nwere ike inyere gị aka iwulite otu ndị okike gị wee rụọ ọrụ nke ọma na ha na ala gị.
Akwụkwọ Iwu Obodo
Ndi otu iwu a na akpo ndi bi na Community Association Bylaws na ndi Community Association Board of Directors ga-achi obodo Rendezvous Bay, nke ga anochita ndi nile choro n’ime obodo a. Akwụkwọ a zuru ezu gụnyere ụkpụrụ nhazi, usoro na nchịkwa, iwu njikwa usoro, iwu na mgbochi ụzọ, ụgwọ niile, yana ozi ndị nwe ụlọ.
Echiche dị egwu na ikuku na-ekpo ọkụ na-eme ka oghere ndị dị n'èzí pụta, ebe ọdịdị mara mma na-adị jụụ, ihe oriri, oghere oge na-adịghị agafe agafe.
Ndị otu ụlọ ọrụ Rendezvous Bay ga-ahụ maka ibupu ụlọ ọ bụla. Site na ndị na-emefu ego, ndị otu ga-arụ ọrụ ozugbo na onye ahịa ma ọ bụ ọkachamara a họpụtara ahọpụta site na usoro imepụta iji mepụta atụmatụ ụlọ ikpeazụ.
Ndị otu Rendezvous Bay ga-elekọta ụlọ niile na ndị ọrụ ngo mpaghara na asọmpi ma nye ndị ahịa nkwa ụlọ. Ndị ọrụ Rendezvous Bay nwekwara ike ịnye ndị ọrụ iwu na ime ụlọ, ma ọ bụ, dịka na imewe ụlọ, ndị otu a nwere ike ịrụ ọrụ na ndị ọkachamara ndị ọzọ akpọrọ maka ọrụ ndị a iji nyefee onye ọ bụla ahịa ụlọ mezue ma dozie ya.
Laghachi ka ụmụ amaala site Real Estate